WordPress Fadlan Sifee Xidhiidhada soo galaya | Martech Zone
Arbaco, Juun 1, 2009 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Maalin dhaweyd waxaan ka faallooday qoraalkii Robert Scoble, Liiska bulshada ka soo horjeedda. Waxay ahayd qoraal weyn oo ku saabsan habraacyada aaladaha sida Friendfeed u adeegsadaan inay isku dayaan inay horumariyaan soo socda xubnaha dhexdooda. Liisaska ka baxsan ee u dhigma cilaaqaadkaaga hadda jira (tusaale ahaan xiriirada iimaylkaaga), waxaan u maleynayaa inay qalabkani carqaladeynayaan awoodda cajiibka ah ee xiriirinta bulshada.
In taas ku filan, in kastoo. Shalay waxaan ogaaday taas Robert Scoble ku soo baxay xiriiriyadayda soo socda:
Marka laga reebo in aysan run ahaantii ahayn Robert Scoble oo leh… Waxay ahayd faalladayda ku aaddan qormada Robert ee hadda isu diiwaangelinaysa sidii isku xirka boggeyga. Kaliya… runti maahan isku xiritaan run ah oo imanaya tan iyo markii la helay nofollow la xidhiidha.
WordPress wuxuu u baahan yahay inuu shaandheeyo xiriiriyeyaasha soo galaya si loogu oggolaado isticmaaleyaasha inay u arkaan backlinks miisaan leh oo ka soo horjeedda xiriiriyeyaasha nofollow. Taasi waxay bixin laheyd hab fudud oo looga ilaaliyo xiriiradaan aan loo baahnayn shaashadayda.
Tags: suuq geynta delivraFiidiyowyada SuuqgeyntaMISOwaa Inteldhufto ee seo
Waa rasmi, waxaan ku jiraa Crackberry